रोचक खबर – Page 71 – rastriyakhabar.com
फ्रान्सेली नागरिकले आर्थिक सहयोग प्रदान
सोलुखुम्बु, १७ बैशाख । जिल्लाको केरुङ–५ चिम्दिङका ९० घरधुरीमा शौचालय र सुधारिएको फलामे चुलो निर्माण गर्नका लागि फ्रान्सेली नागरिकले आर्थिक सहयोग प्रदान गरेका छन् । साथै रु १८ लाख बराबरको माइक्रो हाइड्रो र पीठो पिस्नका लागि पानी घट्टसमेत निर्माण गरिदिएका छन् । केरुङका स्थानीय सुकमान तामाङलाई..
सेक्सको लागि उत्तम बार बिहीवार
एजेन्सी । कुनै पनि कामको लागि एक दिन, एक समय महत्वपूर्ण मुहुर्त हुन्छ । त्यस्तै सेक्सको लागि बिहीवार उत्तम हुन्छ । यो कुरा एक नयाँ अनुसन्धानशोधकर्ता द्वारा पत्ता लागेको हो । एक म्यागेजिन रिसर्च का अनुसार हरेक शोमबार क्यामरा किन्ने शुभ लगन मानिन्छ । त्यस्तै मंगल बार हवाइ यात्राको लागि उत्तम र सस्तो..
सेक्स सम्बन्धित केही रोचक रेकर्डहरु! (तस्बीर सहित)
एजेन्सी। केहि योद्धाहरू यस्ता पनि छन् जसले सेक्सलाई मनरञ्जनको साधनमात्र नसमझिएर यसबाट उपाधि जित्ने पनि गर्दछन्। कतिले त धेरै प्रयास गरेर यो रेकर्ड बनाउछन् भने कसैलाई यो प्रसाद स्वरुप मिल्दछ। यि रेकर्डलाई पढनुहोस र मजा लिनुहोस। संसारको सबै भन्दा ठुलो स्तन (प्राकृतिक): एनि होकिन्स टर्नर जसको..
सनी लियोनको बिकनीमा नयाँ विज्ञापन आउदै! (तस्बीर सहित)
एजेन्सी। रणवीर सिंह आफ्नो कण्डमको विज्ञापनले चर्चा पाइ रहेको वेला सनी लियोन फेरि अर्को विज्ञापनमा देखिने भएकी छिन्। सनी लियोनले हालै डियोड्रेन्टको एउटा हट विज्ञापन शूट गरेकी छिन्।यो विज्ञापनले चाडै नै टीभिमा तहल्का मचाउने जानकारहरु बताउदछन्। भारतिय सञ्चार माध्यम नभ भारत टाइम्सका अनुसार सनी..